Shanduko yeMirairo kuPuerto Rico Hotel uye Tourism Association
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Shanduko yeMirairo kuPuerto Rico Hotel uye Tourism Association
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • vanhu • Puerto Rico Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Puerto Rico Hotel uye Tourism Association nguva pfupi yadarika yakasarudza Pablo Torres, maneja mukuru weCaribe Hilton Hotel, saSachigaro wayo mutsva weBhodi revatungamiriri. Torres achatungamira nekutungamira zvinoitwa neMubatanidzwa kwemakore maviri anotevera. Iyi shanduko yemirairo yakaitika kupemberera kweZuva Rekushanya kuIntercontinental Hotel muIsla Verde.
"Ini ndinotora chigaro chemutungamiri wePRHTA Board of Directors nesimba rakawanda, maonero akanaka, uye chishuwo chakadzama chekupa basa rekushanya nekusimudzira hupfumi kuPuerto Rico," akadaro Torres. "Tichashanda takabatana nemahofisi eruzhinji kusimudzira chirongwa chekubatsira kushanya kuChitsuwa isu tichimutsiridza Chirongwa cheChirongwa cheRusununguko kuramba tichipa kukosha kunhengo dzedu nevatinoshanda navo."
Zvimwechetezvo, panguva yekudya kwemasikati kwemutungamiriri weDare reVatungamiriri riri kubuda, Miguel Vega akapfuudza baton yehutungamiriri mushure mekuratidzira kubudirira kwesangano pamwe nekuita panguva yaakange achitungamira PRHTA.
"Zviri nyore kuratidza izvo zvave zvakanakira indasitiri uye nezvatakawana mukati memakore ano, pamusoro pezvatakashanda pamwe chete kuti tibatsire kushanya. Isu taive vatangiri muhurukuro dzekumisikidza kwekushambadzira musangano kuPuerto Rico. Paive nekupokana nemuenzaniso, asi Sangano rakashanda mukubatana pamwe nehurumende manejimendi kusimudzira chirongwa ichi uye pakupedzisira, muna Chikunguru apfuura, takaona kumisikidzwa kwesangano iri.
Kugadzirwa kweKuziva Puerto Rico ndiko kusvetuka kumberi mukushambadzira nekusimudzira kwePuerto Rico. Tichiri kugadzirisa nekushandura zvimwe zvinhu, asi isu tiri munzira yekuzadzisa isiri-yezvematongerwo enyika iyo ine zvinangwa zvekutanga kukurudzira nekusimudzira kwePuerto Rico senzvimbo yekuenda uye kuchengetedza zvakanakira indasitiri yekushanya kweChitsuwa, ”Executive akatsanangura panguva yemessage yake.
Akatsanangurawo kuti sesangano, Sangano iri raive rakakosha mukukunda kuyedza kunyoresa yevhoti rotari uye kukosha kwayo. Kubva pakutanga kwekuyedza kwemutemo, kumusoro kuburikidza nekuonekwa mudare kuti kumise kuedza, Sangano rave kushingairira mukudzivirira uku kukuvadza kune indasitiri. Akataura zvakare kuti Sangano harizorerutsi uye richaramba rakangwarira munyaya iyi.
“Makasino edu chikamu chakakosha uye chakakosha chezviitiko zvekushanya kuChitsuwa. Pakati pegore ra2017-2018 remari, macasino akajowa anodarika madhora mazana maviri nemakumi manomwe nemashanu kuenda kuHaimari kushambadza nekusimudzira Puerto Rico, kuYunivhesiti yePuerto Rico, uye kuGeneral Fund. Icho chiitiko chekuti kwemakore gumi nemaviri apfuura ekuyedza, mitemo iyi haina kuzadzikiswa. Ticharamba tichichengetedza maindasitiri ehotera dzekasino, ”akadaro.
Munguva yekudya kwemasikati iyi, Frank Comito, CEO weCaribbean Hotel uye Tourism Association (CHTA), vakapinda muchirongwa naMiguel Vega nezve mabhenefiti esangano, mubatanidzwa wedunhu, nemikana yemabhizimusi, pakati pemimwe misoro maererano nemaitiro akanakisa anobatsira kushanya. Uye zvakare, akatsanangura iyo One Caribbean brand uye yayo The Rhythm Never Stops mushandirapamwe, mhedzisiro yechibvumirano chekubatana pakati peCHTA neCaribbean Tourism Organisation (CTO). Chiitiko ichi chakapindwa zvakanaka uye chaisanganisira chikamu chedzidzo nemasemina akati wandei, chiratidziro uye B2B nemisangano yakazoguma nehotera yekutengesa nhengo dzePRHTA nevanoenda.